Home » Lahatsoratra farany farany » News sustainability » Mamaly ny Red Code of Climate ankehitriny
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • fanabeazana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Malta • Vaovao • tompon'andraikitra • News sustainability • Tourism • Travel Wire News
SUNx Malta dia namoaka ny tatitra isan-taona faharoa momba ny Travel Friendly Travel mialoha ny fihaonamben'i Glasgow COP 26. SUNx dia ONG monina any EU natsangana ho lova ho an'ny toetr'andro sy ny lalana maharitra maharitra Maurice Strong.
Ny tatitra dia mampiseho ny fiakaran'ny loza voajanahary ateraky ny toetrandro sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny sehatry ny fizahantany sy fizahan-tany eo amin'ny toekarena manerantany.
Miantso ny fahaizan'ny toetr'andro izao amin'ny hetsika Travel & fizahan-tany.
Ny tatitra dia miantso ihany koa ny drafitra fampihenana ny famoahana mazava sy ny faharetana mifototra amin'ny siansa, ny toetr'andro ary ny fitakian'ny tanora.
Ny masoandrox Report miantso DASH-2-Zero manohana ny Fanambarana momba ny fizahan-tany ao Glasgow farany teo.
Miorina amin'ny angon-drakitra fikarohana voarafitra, ny tatitra dia mampiseho ny fiakaran'ny loza voajanahary ateraky ny toetrandro sy ny fiantraikan'izany amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany eo amin'ny toekarena manerantany.
Ny tatitra ihany koa:
Manohana ny Fanambarana momba ny fizahan-tany ao Glasgow ary mandrisika ny DASH-2-Zero handray ny fanekena natao haingana sy haingana kokoa izay manome tanjona ny famoahana gazy karbonika aotomotera ho an'ny 2030 sy ny famoahana entona entona amin'ny 2050.
Miantso ny fahaizan'ny toetr'andro ho an'ny hetsika Travel & fizahan-tany, ary koa ny drafitra fampihenana ny famoahana sy ny fitohanana mifototra amin'ny siansa, ny toetr'andro ary ny fitakian'ny tanora.
Mamaritra serivisy fanampiana isan-karazany azo atao hanampiana ireo orinasa sy vondrom-piarahamonina hijanona eo amin'ny lalan-kaleha ho an'ny dia any am-paritany.
Manolotra ny Registra momba ny fitsangatsanganana ho an'ny toetr'andro mifandraika amin'ny UNGlobal Climate Action Portal mba hanampiana ireo mpandray anjara fizahan-tany hisoratra anarana amin'ny fironana momba ny toetrandro sy maharitra ary hampiseho ny fandrosoana.
Mahafantatra ny tombotsoany sy ny andraikitry ny tanora amin'ny fiatrehana ny krizy misy eo amin'ny toetrandro sy ny fomba anampian'ny tanora hampiroborobo ny fiovana tsara manerana ny sehatry ny Travel & fizahan-tany.
Profesora Geoffrey Lipman, filohan'ny SUNx Malta, ary filohan'ny Mpiara-miombon'antoka momba ny toetrandro sy fizahantany iraisam-pirenena (ICTP), Hoy izy: "Tsy faly izahay manohana ny Fanambarana Glasgow, fa manantena kosa izahay fa ny tatitra momba ny dia momba ny fizahantany momba ny toetr'andro dia hitondra hetsika sy valiny tsara amin'ny antso nataon'ny sekretera jeneralin'ny Guterres ho an'ny code red for Humanity, izay nohamafisin'ny IPCC faha-6 farany teo Tatitry ny fanombanana. Ny foto-kevitray momba ny dia lavitra momba ny toetrandro sy ny fiantsoana anay a DASH-2-Zero dia afaka mihetsika ho fampiroboroboana ny fanovana haingana sy lakan-drano ho an'ny UN izay nitarika 2030/2050 Green Roadmap ho an'ny ho avy tsaratsara kokoa.
“Masoandrox Malta nametraka ny azy ihany koa Fahitana am-polony taona, izay mikendry orinasa 10,000 voasoratra anarana sy vondrom-piarahamonina 1000 hatramin'ny 2030, ary koa Tompondakan'ny toetrandro 100,000 XNUMX hanohana ny fanovana ”
Hampidina ny tatitra, kitiho eto.
Momba ny SUNx
SUNx dia fikambanana iray monina any Eropa tsy mitady vola, natsangana ho lova ho an'i Maurice Strong, mpisava lalana momba ny toetrandro sy maharitra amin'ny antsasak'adiny lasa izay. Izy io dia miara-miasa amin'ny Ministeran'ny fizahan-tany sy ny fiarovana ny mpanjifa ary ny fahefan'ny fizahan-tany any Malta.
SUNx Malta dia namorona ny 'Green & Clean, Climate Friendly Travel System' hanampiana ireo orinasam-pitetezana sy fizahan-tany sy fiarahamonina hiova ho toekarena vaovao momba ny toetrandro. Ny programa dia mifototra amin'ny fampihenana ny karbaona, ny fihaonana amin'ny tanjona kendren'ny fampandrosoana maharitra ary ny fampitoviana ny làlambe Paris 1.5C. Izy io dia mifantoka amin'ny hetsika sy fanabeazana - manohana ireo orinasa sy vondrom-piarahamonina ankehitriny hanatanteraka ny hetahetan'ny toetrandro ary hampirisika ireo tanora mpitarika rahampitso hiomana amin'ny asa mahafa-po manerana ny sehatry ny Travel.